एसिया कपः श्रीलंका अफगानिस्तासँग पनि हार्यो, लगातारको हारले घर फिर्ता ! - Everest Dainik - News from Nepal
एसिया कपः श्रीलंका अफगानिस्तासँग पनि हार्यो, लगातारको हारले घर फिर्ता !
काठमाडौं, असोज २ । संयुक्त अरब एमिरेट्स (यूएई) भइरहेको एसिया कप क्रिकेटमा पूर्व विश्व च्याम्पियन श्रीलंका अफगानिस्तानसँग लज्जास्पद हार बेहोरेको छ । अफगानिस्तानसँग श्रीलंका ९१ रनले पराजित भएको हो । यो हारसँगै श्रीलंकाको एसिया कप यात्रामा समेत पूर्णबिराम लागेको छ।
समुह ‘बि’ अन्तर्गतको आफ्नो पहिलो खेलमा बंगलादेश बिरुद्ध १३७ रनको हार बेहोरेको श्रीलंका यो खेल जित्नै पर्ने दबावमा थियो । तर अफगानिस्तानसँगको हारपछि समूह चरणमा आफ्ना दूई खेलमै पराजित हुँदै श्रीलंका घर फर्किन बाध्य हुन पुग्यो।
याे पनि पढ्नुस अफगानिस्तानः चुनावी र्‍यालीमा बम आक्रमण, १३ जनाको मृत्यु
सेख जायद मैदानमा टस जितेर ब्याटिंग गरेको अफगानिस्थानले ५० ओभरमा सम्पूर्ण विकेट गुमाएर २४९ रनको योगफल तयार गरेको थियो। ओपनर मोहम्मद शहजाद र इन्शाउल्लाह जनतले पहिलो विकेटको लागि ५७ रनको साझेदारी गर्दै अफगानिस्तानलाई राम्रो सुरुवात दिलाएका थिए।
शहजाद ३४ रन बनाएर आउट भएपछि जनत र रहमत शाहले अफगानिस्तानको स्कोर १०० पार गराउने क्रममा अर्धशतकीय साझेदारी गरेका थिए। जनत ४५ रन बनाएर आउट भएका थिए।
रहमत शाहले एउटा किनार साम्हाली रहे र चौथो विकेटको लागि हश्मतुल्लाह शाहिदीसंग ८० रनको साझेदारी गरेका थिए। रहमत ७२ तथा शाहिदी ३७ रन बनाएर आउट भएपछि अफगानिस्तानको तल्लो क्रमले खास योगदान दिन सकेको थिएन।
याे पनि पढ्नुस सभामुखद्वारा विक्रमासिंघेलाई नै श्रीलंकाको प्रधानमन्त्रीको मान्यता
श्रीलंकाको लागि थिसारा परेरा एक्लैले ५ विकेट लिए। अकिला दनंजयले २ विकेट तथा लासिथ मालिंगा, दुश्मन्था चमिरा र शेहान जयसुरियाले समान १-१ विकेट लिएका थिए।
अफगानिस्तान बिरुद्ध निर्धारित ५० ओभरमा २५० रनको पिछा गर्न उत्रिएको श्रीलंकाको ब्याटिंङ पुनः एकपटक फिक्का साबित भयो। ४१.२ ओभरमा श्रीलंकाले सबै विकेट गुमाएर १५८ रन मात्र जोड्न सक्दा अफगानिस्तानले ९१ रनको जित हात पारेको हो।
याे पनि पढ्नुस श्रीलंकाको संसद बैठकमै कुटाकुट
इनिंगको दोस्रो बलमा नै मुजिबउर रहमानले कुशल मेन्डिसलाई एल.बि.डब्लु धरापमा पार्दै श्रीलंकालाई पहिलो झड्का दिएका थिए। त्यसपश्चात समेत श्रीलंकाले लगातार रुपमा विकेट गुमाउन पुग्यो र साझेदारी बनाउन विफल रह्यो।
धनन्जय डी सिल्भा (२३), कुसल पेरेरा (१७), उपुल थरंगा (३६) र शेहान जयसूर्य (१४) लगातारको अन्तरालमा पभेलियन फर्किंदा श्रीलंकाले १०८ रन जोड्न ५ विकेट गुमाइसकेको थियो। प्रतियोगितामा आज (मंगलवार) समुह ‘ए’ अन्तर्गत हङकङ र भारतबीच खेल हुँदै छ।
ट्याग्स: Afaganstan, Asaiacup, Srilinka